जिर्ण सडकका कारण नगरकोटमा पर्यटक घटे - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
जिर्ण सडकका कारण नगरकोटमा पर्यटक घटे
पुष ३०, २०७४ 603 ऊर्जा खबर/भक्तपुर
भक्तपुर–नगरकोट खण्ड सडक समयमै मर्मत तथा स्तरोन्नती नहुँदा नगरकोट घुम्ने पर्यटकको संख्यामा कमी आएको छ । सडक जिर्ण बन्दै गएपछि आउजाउ गर्न समस्या भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक कम पुग्ने गरेका छन् ।
दुई वर्षभित्र पूरा हुनुपर्ने सडक चार वर्षसम्म अलपत्र छोडिएको छ । समयभित्रै काम पूरा नहुँदा स्थानीयबासी धुलो–धूवाँले आक्रान्त छन् । यही कारण पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोट जाने पर्यटकले समेत सास्ती खेप्नु परेको छ ।
समयमै सडकको काम नहुँदा पर्यटक घट्न थालेको नगरकोटका होटल व्यवसायी कमल लामाले बताए । ‘सफा र स्वच्छ स्थान भएकै कारण पर्यटक यहाँ आउने गर्छन तर बाटो दिक्कलाग्दो भएको गुनासो गर्छन्,’ उनले भने, ‘धेरै पटक निर्माण कम्पनी र सडक विस्तार आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई हुँदैन ।
कमलविनायक–भत्केकोपाटी हुँदै नगरकोट १६ किलोमिटर मुख्य सडक विस्तारमा ढिलाई हुँदा स्थानीयसमेत आक्रोसित हुन थालेका छन् । २०७१ जेठमा शैलुङ कन्सट्रक्सन प्रालिले सुरु गरेको काम आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मै पूरा हुनुपर्थ्याे ।
निर्माणमा अवरोध नहुँदा पनि ठेकेदारको म्याद थपिएको थियो । समयमै काम नगर्नेको म्याद थपेर आयोजनाले ठेकेदार पोस्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
ठेकेदारकै लापरबाहीले काममा ढिलाई भएको सडक सुधार आयोजनाका परामर्शदाता नरेशबाबु श्रेष्ठले बताए । ‘समयमा काम नहुँदा स्थानीय र पर्यटन व्यवसायी मारमा परेका छन्,’ उनले भने ।
ठेकेदारले ४ वर्षमा करिब ४० प्रतिशतमात्र काम पूरा गरेको छ । यस अवधिमा सडकको चौडा बनाउने काम अझै सकिएको छैन् । १६ किलोमिटर सडक ग्राभेलिङ र कालोपत्र गर्ने काम सुरु भएको छैन ।
सडकमा धेरै खाल्डाखुल्डी हुँदा सवारी बिग्रिने र दुर्घटनाको संख्या बढ्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । सडककै कारण नगरकोट जाने पर्यटक घट्न थालेपछि व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् ।